सरकार सीमा खोज्ने कि भाडा ?
dharma ratna shrestha---भारतका रक्षा मन्त्रीले लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने राजमार्गको उद्घाटन गरेपछि तरङ्गित बनेको राजनीति र जनताले सडक तताएर सरकारको बिरोध गरेपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलायो । बैठकमै प्रधानमन्त्रीले मजाक गरिदिए– भारतले बाटो बनायो, बाटो भाडामा दिन सकिन्छ ।
नेपालले आफ्नो सीमा खोजेको कि भाडा ? माटो चाहिएको कि पैसा ? नेपाली भूमिमा डोजर चलाएर भारतीय बनाइरहेको छ, नेपाल सरकार भने भाडामा दिने र भाडा असुल्ने कुरा गरिरहेको छ । सरकारमा बस्नेको मानसिकता त ठिक छ ?
अस्तित्व, राष्ट्रियता भनेको भाडा हो ? आफ्नो भूभाग कब्जा गरेको, अतिक्रमण गरेको मामिला सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । यति गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले मजाक गर्ने ? नेपाल सरकारसँग संस्थागत चेतना बाँकी छ कि छैन ?
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो । खोजी पस्नेहरुले पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राज्यस्तरमा खोजी गर्दा झन बढी प्रमाणहरु भेटिनेछन् । यसबाहेक चीन र बेलायतसँग सम्पर्क गर्दा थुप्रै प्रमाणहरु भेटिन्छन् र ती अकाट्य प्रमाणहरुले महाकाली नदीको उदगम र महाकाली वारीका सबै भूभागको पहिचान हुनसक्छ । एकथरि ग्रेटर नेपालको कुरा उठाइरहेका छन् । विषयान्तर भन्दा पनि सुगौली सन्धिपछिको भूभाग कति हो, पहिले ती भूमिको रक्षा जरुरी छ । काइते कुरा र कामले देशलाई अझ घाइते पार्नसक्छ ।
हाम्रा प्रतिनिधिहरु संसदमा तात्छन् र सेलाउँछन् । सरकारका रक्षा मन्त्री कालापानी जाने भनेर ३० किलोमिटर वरैबाट फर्कन्छन् । गृहमन्त्री कालापानीमा सुरक्षा पोष्ट राख्ने भनेर १२ किलोमिटर वरै पोष्ट स्थापित गरेर प्रचार गराउँछन् । प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने र नेपालको सही नक्सा प्रकाशित गर्ने बताउँछन् तर सर्वदलीय बैठकमा भाडाका कुरा उठाएर हँसी उडाउने काम पनि गर्छन् । नक्सा छाप्ने हो, जमिन फिर्ता ल्याएर छापिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री बल्ल नक्सा छाप्नसम्म तैयार भएका छन् । तैपनि भारतसँग कुरा गरेर नेपाली भूमिमा अतिक्रमण रोक्नका लागि अनुरोध गर्न सक्दैनन् । नेपाली भूमिको दावी गर्न खुट्टा लरबराउने सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउला ?
दोष नेपाली जनको पनि छ । जहिले पनि यिनै भ्रष्टाचारी र विदेशीपरस्तलाई चुनाव जिताउने ? जनता सजग नभएसम्म, सही प्रतिनिधिको चयन नगरेसम्म देश यसैगरी विदेशीबाट लुटिने क्रम रोकिने छैन । चुनावमा जिताउन सक्ने जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई खबरदार भनेर गलत काम गरे दण्डित गर्छु भन्न नसक्दा पनि नेताहरु छाडा साँढे भएका हुन् । जनप्रतिनिधि बन्ने र विदेशी प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने परिपार्टीले देशघातका कर्महरु बढेर गएका हुन् ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि हेरौं, जहिले पनि यिनै नेता । यिनले कहिले पनि देश र जनताका लागि काम गरेनन् । फेरि चुनावमा जनता यिनैलाई भोट दिइरहेका छन् किन ? यही सवाल हो, देश पछि पर्नु र देश यसरी लुटिनुको ।